अमेरिकी एक कार्यक्रममा ट्रम्पले भने, ‘अमेरिकाको सहयोगबिना साउदी अरब दुई हप्तामा बर्बाद हुन्छ’-Nepali online news portal
अमेरिकी एक कार्यक्रममा ट्रम्पले भने, ‘अमेरिकाको सहयोगबिना साउदी अरब दुई हप्तामा बर्बाद हुन्छ’
बीबीसी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले साउदी अरबका किंग सलमानले अमेरिकी सेनाको सहयोग बिना दुई हप्तासम्म पनि राज गर्न नसक्ने बताएका छन् ।
अमेरिकी राज्य मिसिसिपीमा एक र्यालीलाई सम्बोधन गर्दै ट्रम्पले भने, ‘हामी साउदी अरबको सुरक्षा गर्छौं । उनीहरु निकै धनी छन् । मलाई किंग सलमान निकै मनपर्छ । तर मैले उनलाई भनिसकेको छु, ‘हामीले तपाईंको सुरक्षा गरिरहेका छौं । यदि हामीले तपाईंलाई सहयोग नगरे तपाईंले दुई हप्तासम्म पनि राज गर्न सक्नुहुन्न ।’’
यद्यपी, ट्रम्पले किंग सलमानसँग कहिले कुरा गरे भन्ने बारे जानकारी दिएनन् । साउदी अरब खाडी मुलुकमध्ये अमेरिकाको सायद सबैभन्दा भरोसायोग्य साथी हो ।
कुवेतको मुद्दामा भएको पहिलो इराक युद्धदेखि अहिलेसम्म, दुबै देश एकअर्काको साथमा रहँदै आएका छन् । यस्तोमा प्रश्न यो उठ्छ कि ट्रम्पले आफ्नो सहयोगी देशका लागि यति कडा शब्दको प्रयोग किन गरे ?
राष्ट्रपति बनेलगत्तै ट्रम्पले साउदी अरबको पनि भ्रमण गरेका थिए । साउदी अरबमा उनको तरवारको डान्स निकै भाइरल भएको थियो । डेढ वर्ष नपुग्दै यो सम्बन्धको न्यानोपन किन हराइरहेको छ ?
यसको सजिलो विवेचना यो हुनसक्छ कि ट्रम्प नसोचिकनै सार्वजनिक बयान दिने गर्छन् ।
सायद राष्ट्रपति ट्रम्प आफ्ना सहयोगीमाथि तेलको बढ्दो मूल्यमा लगाम लगाउनका लागि यस्तो बयान दिइरहेका छन् तर तेलको यो राजनीतिका विभिन्न पाटा छन् ।
यसअघि पनि अमेरिकाले तेलको मुद्दामा साउदी अरबलाई चेतावनी दिँदै आएको छ । यसै वर्ष जूनमा राष्ट्रपति ट्रम्पले एक ट्वीटमार्फत साउदी अरबका किंग सलमानसँग तेलको मूल्य कम गर्नेबारे कुरा भएको जानकारी दिएका थिए । ट्रम्पले साउदी अरब यसको लागि राजी भएको समेत बताएका थिए ।
त्यतिबेला ट्रम्पले तेलको बढ्दो मूल्यका लागि इरान र भेनेजुएलालाई जिम्मेवार बताएका थिए ।
तर हालै अमेरिकाले इरानमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको छ । यद्यपी, यो प्रतिबन्ध नोभेम्बरदेखि लागू हुनेछ तर यसको घोषणा लगत्तै तेलको बजार भने तात्तिसकेको छ । इरान संसारभरी कच्चा तेलको महत्वपूर्ण निर्यातकर्ता हो । यो देशले हरेक दिन करिब तीस लाख ब्यारेल तेल निर्यात गर्छ ।
तेलको मूल्यमा निगरानी राख्ने स्टिफन इन्नेसले रोयटर्सलाई भने, ‘नोभेम्बरमा इरानको तेलमाथि प्रतिबन्ध सुरु हुनेबित्तिकै तेलको बजारमा दबाब अत्यधिक बढ्ने चिन्ता छ । यतिबेला बजारले प्रतिबन्धको असरलाई कम आँकलन गरेपनि स्थिती चिन्ताजनक हुनसक्छ ।’
इरानमाथिको प्रतिबन्धपछि तेलको मूल्य बढिहालेको खण्डमा यसले अमेरिकालाई क्षती पुर्याउँछ । मूल्यलाई नियन्त्रण गर्नका लागि अमेरिका साउदी अरबलाई दबाब दिइरहेको छ र ट्रम्पको ताजा बयानले पनि यसैतर्फ संकेत गरेको छ ।
मुसलमानको पवित्र स्थल मक्का र मदिना साउदी अरबमा भएका कारण संसारका करोडौं मुसलमान यसलाई विशेष महत्व दिन्छन् तर शिया बाहुल्य भएको इरानले इस्लामी दुनियाँको नेतृत्वको हिसाबले आफूलाई साउदी अरबको प्रतिद्वन्द्वी मान्छ ।
अमेरिका र इरानको कलह जगजाहिर छ । यस्तोमा साउदी अरब र अमेरिका एक प्रकारले गल्फमा नेचुरल एलाई (स्वभाविक सहयोगी) हुन् ।
इराकको राजनीतिक उथलपुथल, मध्य–पूर्वमा इस्लामी चरमपन्थ र इरानको कथित परमाणु कार्यक्रमले साउदी अरब र अमेरिकाबीचको सम्बन्धलाई थप नजिक बनाउँछ । यस्तोमा ट्रम्पको कडा बयानका बाबजुद यी दुई देशबीचको सम्बन्धमा यथास्थिती रहिरहन्छ किनभने अहिले कमसे कम इरान र इस्लामी चरमपन्थका कारण दुबै देशलाई एक–अर्काको निकै आवश्यक छ ।
खाडीमा विरोधको स्वरः
राष्ट्रपति बनेपछि ट्रम्पले थुप्रै पटक साउदी अरब र उसको सत्ताधारी परिवारका लागि कडा शब्द प्रयोग गरे । खाडीको मिडियामा यसका लागि एकप्रकारको रोष पनि छ ।
मिडिल इस्ट आईमा मदावी अल–रशिद लेख्छिन्, ‘ट्रम्पको अमेरिका र साउदी अरबबीचको सम्बन्धमा कूटनीतिको पर्दा पनि गायब छ । यसमा विनम्र भाषासमेत देख्न पाइँदैन ।’
उनलाई लाग्छ कि यमनमा साउदी अरबको हस्तक्षेपलाई समर्थन गरेको बदलामा अमेरिका तेलको मूल्यमा आफ्नो मनमर्जी गर्न चाहन्छ । सायद यो यमनको युद्ध नै हो जसले साउदी अरबको अमेरिकामाथि निर्भरता थुप्रै गुणा बढाइदिएको छ ।
तर यो लडाईं जारी राख्नका लागि साउदी अरबलाई जसरी पनि अमेरिकाको सहयोग चाहिन्छ ।